निर्मला हत्या प्रकरण : के हो डीएनए परीक्षण ? कसरी पत्ता लाग्छ दोषी ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
निर्मला हत्या प्रकरण : के हो डीएनए परीक्षण ? कसरी पत्ता लाग्छ दोषी ?
असोज १, २०७५ सोमबार १४:३८:१५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौ – कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि दोषीको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दै सरकार र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न भन्दै सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले अपराधी पत्ता लगाउन भन्दा पनि धेरैलाई आशंकाको घेरामा मात्रै राखेको छ । घटनास्थलबाट सेनाको २५ नम्बर बाहिनी नजिकै रहेको र सेनामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने टोलीले औँल्याएको छ । यस्तै टोलीले मृतक बालिकाको मामालाई पनि छानबिनमा ल्याउन भनेको छ ।
यस्तै नेपाल प्रहरीले भदौ १४ मा एसएसपी उत्तम सुवेदी नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको जिम्मेवारी आइतबारदेखि डीआईजी धिरु बस्न्यातलाई सुम्पेको छ ।
दुई महिना हुन लाग्दा समेत घटनामा संलग्न अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मृतकका बाबुआमा न्याय माग्दै काठमाडौं आएका छन् । विभिन्न स्थानमा पुगेर निर्मलालाई न्याय दिन उनीहरुले हारगुहार गरिरहेका छन् । देशव्यापी दबाब बढिरहेको छ । तर यस अवधिमा अपराधीको सुईंको समेत लाग्न सकेको छैन ।
घटनामा संलग्नताको आशंका गर्दै निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक डिल्ली बिष्टसहित उनका छोरा र भीमदत्त नगरपालिका (कञ्चनपुर) का नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टका भतिजाको डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको छ ।
हत्या प्रकरणको दोषी अहिलेसम्म नभेटिएपछि एसपी बिष्टसहित उनका छोरा किरण बिष्ट र भीमदत्त नगरपालिका (कञ्चनपुर) का नगरप्रमुख सुरेन्द्र बिष्टका भतिज आयुष बिष्टको डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमूना लिइएको छ ।
नेपाल प्रहरी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका विधि विज्ञान विज्ञ डाक्टर हरिहर वस्तीसहितको टोलीले एसपी बिष्टसहितको डीएनए परीक्षणका लागि रक्त संकलन गरेको हो । यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त रहेको भन्दै दिलिप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । तर उनको डीएनए र निर्मलाको शरीरमा भेटिएको डीएनए नमिलेपछि दिलिपलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
तीनैजनाको डीएनए परीक्षणका लागि टोलीले भदौ २८ गते रक्त संकलन गरेको हो । दिलीप सिंह बिष्टको डीएनए परीक्षण रिपोर्ट फरेन्सिक डिपार्टले तीन दिनमै दिएको थियो ।
अहिले संकलन गरेको तीनै जनाको डीएनए रिपोर्ट पनि अबको केही दिनमै आउने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले जानकारी दिनुभयो ।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्न डीआईजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको टोलीले अब निलम्बनमा परेका सबै प्रहरी अधिकृतसँग बयान लिने तयारी थालेको छ ।
निर्मलाकाे हत्यामा संलग्न भएको भन्दै मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह बिष्ट र अर्का युवा चक्र बडूको डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि अपराधी पत्ता लगाउन यो टोलीले सबै विधि प्रयोग गर्नेछ ।
निलम्बित प्रहरी अधिकृतहरुसँग बयानका क्रममा उनीहरुका कुरा सही या गलत भएको पत्ता लगाउन विकसित प्रविधि समेत यो समितिले प्रयोग गर्नेछ । गहन अनुसन्धानका लागि यो समितिले सीबीआर र ‘पोलिग्राफ टेस्ट’ समेत गर्ने प्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो । घटनालाई जसरी पनि सुल्झाउन प्रहरीसँग रहेको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
के हो डीएनए परीक्षण ?
वैधता पत्ता लगाउने अकाट्य विधि नै डीएनए परीक्षण हो । अर्थात सत्य जाँच्ने एक सटिक उपाय यसलाई लिइन्छ ।
यदि कुनै देखिने प्रमाण छैन, वा यदि कोही झुटो बोलिरहेको छ भने त्यसका लागि एक मात्र निर्विकल्प माध्यम डीएनए परीक्षण हो । अहिलेसम्म देशभरका कैयौँ घटनाहरूमा जहाँ कुनै स्पष्ट प्रमाण वा अन्य जटिलताहरू थिए, त्याहाँ डीएनए परीक्षणको माध्यमबाटै समस्या समाधान गरिएको घटनाहरु छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएको फागुन २८ गते भएको यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको शव डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गर्दै परिवारलाई बुझाइएको थियो । प्रत्येक व्यक्तिको डीएनएको बनावट, औँलाहरु जस्तै एकअर्काबाट फरक फरक हुन्छन् ।
डीएनए परीक्षण गर्दा तीनसय अर्ब घटनामध्ये कुनै एकमा गल्ती हुन सक्ने विश्वभरका डीएनए वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । आजको युगमा जटिल आपराधिक मामलाहरू डीएनए परीक्षणमार्फत सुल्झाउन सहज भएको छ ।
डीएनए परीक्षण विधिबाट अकाट्य सबुत पत्ता लगाउन सफलता मिल्छ । तर परम्परागत तवरले गरिने अनुसन्धानले यस्ता सबुत भेट्टाउन असमर्थ रहन्छ ।
कसरी गरिन्छ डीएनए परीक्षण ?
जसको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने हो उसको कपाल, रगत, छाला तथा मूत्रको नमूना आवश्यक पर्छ । यसबाहेक गालाभित्र अर्थात मुख भित्रबाट पनि आवश्यक नमूना लिन सकिन्छ ।
यी नमूनाहरु परीक्षण गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरु छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ । जसका लागि ८ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गर्छ । तर निर्मला प्रकरणमा भने सबै खर्च सरकारी तवरबाटै ब्यहोरिएको छ । नमूना लिइसकेपछि पन्ध्र दिनभित्रैमा यसको परीक्षण रिपोर्ट पाउन सकिन्छ । दिलिपसिंह बिष्टको तीन दिनमै परीक्षण टोलीले रिपोर्ट निकालेको थियो ।
केही वर्षको अवधिमा डीएनए परीक्षणमार्फत अपराध, बलात्कार तथा हत्याका धेरैजसो सुल्झन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु हल गरिएको छ ।
मृतक बालिका पन्तको डीएनए रिपोर्ट आइसकेको र उक्त रिपोर्टमा अन्य एकजनाको समेत नमूना पाइएको परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यो पाइएको नमूना कस्को हो भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन । यस अघि दिलिपसिंह बिष्टको डीएनए परीक्षण गर्दा बालिकाको शरीरबाट भेटिएको नमूनासँग मेल खाएन । उनी रिहा भए । अहिले फेरि तीन जनाको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरिँदै छ । यो परीक्षणका क्रममा नमूना मिल्न गए अपराधी सहजै फेला पर्न सक्छ । होइन भने प्रहरीको अनुसन्धानले फेरि अर्कै मोड लिन सक्छ ।
साउन १० गते घरबाट साथीकहाँ हिँडेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त साउन ११ गते मृत अवस्थामा उखुबारीमा भेटिएकी थिइन् । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि डीएनए परीक्षणबाट भइसकेको छ ।
अन्तिम अपडेट: फागुन २४, २०७५
Sept. 18, 2018, 7:33 a.m.
डिएनए निकाल्ने प्राबिधिकलाई घुसदिएर नेगेटिप बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको पराकाष्ठा : आफ्नै भूमिमा सडक बनाउन दिँदैन
मण्डेलाको शतवार्षिकीमा आयोजित फुटबलको उपाधि बार्सिलोनालाई
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः पूर्व एसपी विष्ट धरौटीमा रिहा